Anchoring clamp PA-1500.1 dia tena fanitsiana, natao mifikitra LV-ABC Voaro-dalana, tsy miandany amin'ny mpitondra hafatra. Koa izany no mety ho vokatra LV-ABC niteraka-dalana, tsy miandany amin'ny mpitondra hafatra, dia azo mifono wedges amin'ny carborundum mba hampitomboana ny efa voavitrana.
Ny clamp dia ahitana ny maty casted aluminium firaka vatana sy ny fanitsiana tena plastika wedges izay tsy miandany clamp ny mpitondra hafatra. Clamp tena mahatohitra harafesiny vita amin'ny aluminium casted die firaka, fahafahana vonjimaika ny Stainless vy, wedges ny toetr'andro sy ny UV mahatohitra nanamafy plastika. Ny Stainless vy onitra mamela fametrahana ny clamps amin'ny bracket. LV ABC clamps fifanenjanana sy LV ABC fononteny mahitsizoromisy na misaraka, na miaraka toy ny fivoriambe.
Fitaovana: harafesiny mahatohitra maty casted aluminium firaka, Stainless vy onitra, fiberglass nanamafy plastika.
Type MBL, kn Cable habeny, MG Weight, kilao
Previous: Anja ambony Type fihenjanana Clamp PA-1000
Manaraka: LV ABC Cable fihenjanana Clamp PA-1500
tariby anja clamp
ambany ABC malefaka tsara
Low malefaka tariby clamp
ambany malefaka clamp
LV ABC olana clamps
ovehead fifanenjanana clamp
Aretina clamp PA-1500
Fihenjanana Clamps Ampio America
LV ABC Cable fihenjanana Clamp PA-1500
LV ABC Cable Vatofantsika Bracket CA-1500
Insulation manindrona Connector, ZOP-11 (1.5-16 / 1 ...